Badhaadhe: Dad u geeriyooday cudurka shuban biyoodka – Radio Muqdisho
Badhaadhe: Dad u geeriyooday cudurka shuban biyoodka
Wararka ka laga helayo xarumaha caafimaadka degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ayaa tilmaamaya in 48-saac ee ugu dambeysay ay goobaha caafimaadka ugu geeriyoodeen 15 ruux oo u badan carruur, kuwaasi oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ah.
Saraakiisha caafimaadka ee Badhaadhe ayaa sheegay in daawo la’aan ay ka jirto magaalada, maadaama ay isa soo tarayaan dadka uu soo ridanayo cudurka, waxaana ay codsadeen in gurmad lala soo gaaro dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka ah.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Jubada Hoose Aadan Maxamed Kismaayo ayaa ku soo waramay in magaalada ay ka jirto xaalad beni’aadanimo oo aad u liidato, isla markaana ay bulshada ku dhaqan codsadeen in gar gaar dhan waliba leh lala soo gaaro.
Todobaadkii tegay ayay markii deeq dawo ah la gaarsiiyay isbitaalka magaalada, balse ay dhaqaatiiru sheegeen in ay yaraatay dawada sababo la xiriira dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka oo aad u soo kordhay.
DAAWO/SAWIRRO-Waxqabadka Dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay.